नेकपामाथिका आरोप धुने कसरी ?
जनमत नेकपाको शक्ति हो । जनताले उल्लेख्य बहुमत दिएर नेकपालाई ५ वर्षमा देशको शान्ति, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न जनादेश दिएका हुन् । त्यो जनमतको जनबलमा नेकपाको सरकार बनेको हो ।
तर, डेढवर्षको अवधिमा नेकपामाथि अनेक आक्षेप लागेका छन् । ती आक्षेपले नेकपाको छवि जनमतका अगाडि धमिलिन पुगेको छ । त्यो धमिलिएको छवि धुने जिम्मेवारी नेकपाका नेता कार्यकर्ताकै हो । धुन सकिएन भने यसको दूरगामी क्षति नेकपाले बेहेर्नुपर्छ । यसकारण पनि नेकपाका लागि यो सतर्कता र सचेतताको समय हो । नेकपाले यसबारे आत्ममिमांसा गर्नैपर्छ ।
मिडिया बिधेयक र गुठी विधेयकले नेकपामाथि ठूलै आक्षेप लागेको छ । यो अनुभूति गरेरै अध्यक्ष प्रचण्डले होमवर्क नपुगेको र सुधार्न सकिने बताएका हुन् । कमजोरी छ भने सुधार्नैपर्छ । विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाह लिएर सही निर्णयमा पुग्न सकिएन भने बलात्कार, हत्या, तस्करीलगायतका अनेक प्रकरणमा जसरी नेकपाको कमजोरी देखियो, त्यस्तो कमजोरीले नेकपा कमजोर हुनसक्छ ।
हामीले सुन्नैपर्छ, जनताको आवाज । जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने कम्युनिष्ट हुनसक्छ ? स्वाथ्य र शिक्षामा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने पनि कम्युनिष्ट हुनसक्छ ? एनजीओ, आइएनजीओ कम्युनिष्टहरु संलग्न छन्, जनतामाथि सामन्त बनेको आरोप लगाउन पाइन्छ ? यस्ता अनगिन्ति आक्षेपहरु छन्, जसलाई चिर्न सक्नु नै नेकपाले प्राप्त गरेको जनबल हुनेछ ।
प्रतिपक्षीदेखि कतिपय संचेतन बर्गले वामपन्थीलाइ द्रव्यपन्थी भनेका छन्, कम्युनिष्टलाई कमाउनिष्ट भनेर झ्याली पिटेका छन्, लेनिनवादलाई लेनदेनवाद र माक्र्सवादलाई मार्सीवाद भनेर उल्ली उडाइरहेका छन् ।
किन ? हावा नचली पात हल्लिदैन । आगो नबली धुवाँ उड्दैन ।
यी आरोपहरुको केही न केही आधार छन्, ती आधारहरुका बारेमा नेकपाले व्यापक छलफल र बहस गरेर नेकपालाई बहुदलीय जनवादकै जगमा उभ्याएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । एकातिर यसरी समाजमा नेकपाबारे व्यापक विरोधका स्वर बढ्दैजानु र नेकपाभित्र सत्ता संघर्षका आवाज सुनिनु र ध्रुविकरणका छनकमनक देखिनुले नेकपाको शासन कूशासन हुनथालेको देखिन्छ ।
नेकपा जनताको भरोसा हो । चुनावको नतिजाको सन्देश यही हो । यो भरोसालाई कायम राख्न सकिएन भने नेकपा जनताका लागि अभिषाप सिद्ध हुनसक्छ । भरोसा कायम राख्न सक्नुमा बरदान हुनेछ । नेकपाले निर्णय गर्ने बेला यही हो– बरदान बन्ने कि सराप ? चुनावमा जनताले जुन उत्साहका साथ नेकपालाई बरण गरे, त्यसको भार लाग्न नदिन पनि नेकपाले जनताको आवाज सुन्ने, अपेक्षा जान्ने र जनतामा समाहित हुने निर्णय गर्नैपर्छ ।
नेकपामाथि धेरै नै दाग लाग्न थालेका छन् । ती दागहरुलाई धुने कसरी ? यही प्रश्नमा आज नेकपाबादी भन्नेहरुले सोच्न जरुरी छ ।